वेब डिजाइनर - के यो छ? उनी वेब डिजाइनरका लागि कहाँ पढ्छन्?
इन्टरनेट, वेब डिजाइन
20 औं शताब्दीको अन्त्यमा नयाँ प्रविधिहरू संसारमा तोडिदिए। अब यो युवाको लागि र कम्प्युटर हार्डवेयर प्रेमीहरूको लागि पत्ता लगाउनको लागि समय हो, वेब डिजाइनर - के यो हो? एक आधुनिक पीढी शायद यस्तो पेशामा चासो हुनेछ, किनभने यो एक आभासी काल्पनिक संसारमा विस्थापित गर्न सक्दछ, जहाँ सबै स्वतन्त्र रूपमा "भर्चुअल ब्रह्मांड" को रूपमा चयन गर्दछ।
शुरुआती वेब डिजाइनरहरूसँग धेरै व्यावसायिक र अनुभवी पेशेवरहरूको कामबाट सिक्ने उत्कृष्ट अवसर छ। तपाईं यसलाई कुनैपनि साइटमा स्विच गरेर यो गर्न सक्नुहुनेछ। यो एक फर्म, एक निगम, एक मात्र सोशल सञ्जाल र अन्यको आधिकारिक पृष्ठ हुन सक्छ।
त्यसैले, सबै भन्दा पहिले, तपाईंलाई रुचिको मुख्य प्रश्न बुझ्न आवश्यक छ: वेब डिजाइनर - यो के हो? जवाफ सरल छ: यो एक प्रकारको व्यवसाय डिजाइनर हो। उपसर्ग "वेब" ले बताउँछ कि यो क्षेत्र विकासको साथमा, साथै साथ इन्टरनेट साइटहरु को ग्राफिक डिजाइन सँग सम्बन्धित छ। यो पेशा प्रत्येक पृष्ठको एक अद्वितीय उपस्थिति सिर्जना गर्ने हो, जुन एक विशेष निर्माताको होस्टमार्क हुनेछ।
एक वेब डिजाइनरको पेशा एक विशेष कम्पनीसँग सम्बद्ध एउटा यादगार दृश्य छवि सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। यो स्पष्ट रूपमा विषय र एक विशेष फर्मको दैनिक गतिविधि संग जोडिएको हुनुपर्छ। एक उज्ज्वल र अद्वितीय डिजाइनले प्रयोगकर्ताहरूको प्रवाह र मूल्याङ्कनको स्तरवृद्धि गर्नेछ।
मुख्य कार्य र उद्देश्य
साइटहरूको डिजाइनरको काममा तीनवटा मुख्य पक्षहरू छन्:
आवश्यक जानकारी रिपोर्ट गर्दै।
अब कामको सारको पूर्ण बुझ्नको लागि प्रत्येक बिन्दुलाई अलग-अलग रूपमा हेरौं।
पहिलो, सिर्जना गरिएको डिजाइनले साइट अनूठा र अद्वितीय बनाउनुपर्दछ। यसमा यस्तै वा दोहोर्याउने तत्वहरू हुँदैन जुन प्रयोगकर्ताहरूले अन्य इन्टरनेट पृष्ठहरूसँग भ्रमित गर्न सक्दछन्।
दोस्रो, मानिसहरूको ध्यान आकर्षित गर्न पनि कम महत्त्वपूर्ण कार्य हो। प्रत्येक वेब डिजाईजरले साइट प्रस्तुत गर्न सक्षम हुनु पर्छ जुन धेरै प्रयोगकर्ताहरु सम्भव छ यो ध्यान दिन सक्छ। डिजाइन आफैलाई फसी वा कष्टप्रद हुँदैन। गैर-मानक र चमकदार ग्राफिक वस्तुहरूले थप मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ। तर यो याद छ कि धेरै धेरै सानो ग्राफिक्स विवरण साइट आगन्तुकहरू बेवास्ता गर्न सक्छन्, किनभने तिनीहरूका उपस्थितिले जानकारीको धारणालाई नकारात्मक असर पार्नेछ।
र, अन्तमा, तेस्रो, प्रत्येक नौसिखिया र व्यावसायिक थाहा हुनुपर्छ कि वेब डिजाइन सरल सुन्दर छवि होइन। यसको अलावा, यो जानकारी प्रयोगकर्ताहरूलाई बुझाउँछ। राखिएको सामग्री ठीक तरिकाले व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कि पाठक प्रदान गरिएको जानकारी प्रयोग गर्न खुसी छ। इन्टरफेस साधारण हुनु पर्छ र पहिले नै यो प्रशिक्षण बिना intuitively प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। ग्राहकले चाँडो त्यस्ता मेनु वस्तुहरू "सामान्य जानकारी", "मूल्यहरू", "सम्पर्क", आदिलाई फेला पार्नै पर्छ।
धेरै रोचक चीजहरू वेब डिजाइनर हुन सक्छन्। खरोंचबाट, साइटहरू सिर्जना गर्न गाह्रो छ, तर थप अनुभवी मालिकहरूका लागि यो धेरै गाह्रो हुनेछैन। धेरै शुरुवात देखि वांछित साइट बनाउन र पूरा गर्न, सबै भन्दा पहिला तपाईंलाई विशेष ज्ञान र धेरै समयको आवश्यकता हुनेछ।
यस्तो डिजाइनरको काम साइटको निर्माणको साथ सुरु हुन्छ। उसले आफैंको लागि काम तय गर्नु पर्दछ र त्यसपछि एक टेक्नोलोजी कार्यको विकास र कार्यान्वयनमा जान पर्छ। तपाईंले सुरु गर्नु अघि, भविष्यमा रङ र ग्राफिक्सको सही संयोजन चयन गर्न तपाईँले लक्षित श्रोताहरूलाई निर्धारण गर्न आवश्यक छ। कुनै पनि परियोजनाको अन्त्यको बाटो धेरै मुख्य बिन्दुहरु मार्फत छ:
इन्टरफेसको डिजाइन, साथसाथै पृष्ठहरूको डिजाइन।
नयाँ एचटीएमएल टेम्प्लेट सिर्जना गर्नुहोस्।
अन्तरक्रियात्मक तत्वहरूको सिर्जना।
समाप्त साइट परीक्षण गर्दै।
पूर्ण परियोजनाको पूर्णिकरण।
जैकब नील्सन ("वेब डिज़ाइन"), जेस ग्यारेन्ट ("वेब डिज़ाइन: इन्टर्नेटको अनुभवका तत्वहरू"), टीना सुटन ("रङ्ग हार्मोनी") जस्ता वेबसाईटहरूको पेशालाई मास्टर गर्न मद्दत गर्नेछ।
अब धेरै व्यक्ति एक स्थिर र ठूलो आय सँगको लागि कसरी वेब डिजाईजर हुन कसरी इच्छुक छ। सामान्यतया, उनको वेतन केवल आफ्नो कार्य अनुभव, पोर्टफोलियो को उपलब्धता र अतीत मा सफल परियोजनाहरु को प्रमाण मा निर्भर गर्दछ।
वेबसाइट डिजाइनमा मूल्यहरु को एकदम विस्तृत रेंज छ, जहाँ सबै केहि प्रदान गरिन्छ केवल प्रदान को काम को गुणवत्ता ले। निस्सन्देह, र प्रत्येक साइटको लागि भुक्तान फरक हुनेछ। अनुभव र उदार ग्राहकहरूको लागि धन्यबाद, अधिकतम मूल्यको लागि सरल डिजाइन विकसित गर्न सकिन्छ। र सामान्यतया, अनुमानित वेतन 25,000 र 50,000 रूबल र अधिक को बीच हो।
म कहाँ काम गर्न सक्छु?
एक राम्रो वेब डिजाइनर एक नौकरी कहाँ पाउन सक्छ? यो के हो, यो माथि भनिएको थियो, तर यहाँ एक विशिष्ट कार्यको साथ तपाईंले अधिक बुझ्न आवश्यक छ।
अक्सर, यस्तो व्यक्ति टाढाबाट काम गर्दछ (उदाहरणका लागि, घरमा), एकै समयमा विभिन्न ग्राहकहरु बाट धेरै अर्डर प्रदर्शन गर्दा। साथै, वेब डिजाइनरले विशेष स्टुडियो, कम्पनी, विज्ञापन विभाग र अन्यमा काम गर्न सक्छ।
कुनै वेब डिजाइनर कोर्सहरू शुरुवात र मध्यवर्ती स्तर दुवैका लागि प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ। त्यहाँ सबैले पर्याप्त जानकारी र दक्षताहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् जुन भविष्यको काममा आवश्यक पर्दछ।
डिजाइनरको जिम्मेवारी इनपुट डेटा एकत्र गर्न: लक्ष्य, कार्य, ग्राहक इच्छाहरू र यति। त्यसपछि तपाईंले भविष्यका पृष्ठहरूको स्केच सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसपछि सबै केहि निश्चित योजना अनुसार गरिन्छ, माथि उल्लिखित।
अन्य चीजहरू बीच, वेब डिजाईमर एक थप जिम्मेवारी छ, जुन तपाईं कहिल्यै बिर्सनुहुन्न। यो - नवीनतम प्रविधि ट्रैकिंग, यो छ, नयाँ चिप्स र उद्योग मा हाइलाइट। त्यस्तो ज्ञान सफल हुन उपयोगी छ र भविष्यमा काम माग्न निश्चित छ।
निस्सन्देह, हरेक वेब डिजाइनर प्रोग्रामिंग भाषाहरू थाहा पाउनुपर्दछ। सबै भन्दा साधारण र महत्त्वपूर्णहरू C ++, C #, F # हुन्। साथै स्क्रिप्टिङ भाषाहरू - जाभास्क्रिप्ट र VBS सिक्नको लागि यो चोट लाग्दैन।
एक राम्रो वेब डिजाइनर राम्रो कमाईर र उच्च गुणस्तरको काम हो। के यो अब थाहा छ, तर यो पेशामा त्यहाँ कुन गुणहरू छन्?
एक धेरै महत्त्वपूर्ण गुणस्तर सौंदर्य स्वाद हो, जुन जरूरी हुनुपर्छ। त्यस्ता गुणहरू पनि प्रस्तुत हुनुपर्छ: पूर्णतावाद, दृढता, धैर्यता, ध्यान, र पनि एक रचनात्मकता, उत्पत्ति र विश्लेषणात्मक सोच बेवास्ता गर्न हुँदैन । यो सबै आवश्यक रूपमा एक डिजाइनरको पेशी छनौट गर्ने व्यक्तिमा अवस्थित हुन अनिवार्य छ, किनकी त्यस्तो गुण बिना इच्छित स्तर र गुणस्तर प्राप्त गर्न असम्भव छ।
धेरै मानिसहरू निश्चित छन् कि यो काम धेरै सरल छ। उनको लागि, तपाइँलाई बस बस्न आवश्यक छ, केहि माउस वा किबोर्ड कुञ्जीमा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि पैसा पाउनुहोस्। यसबाहेक, एक निश्चित दर्शकहरूले दावी गर्छन् कि केही मिनेटमा वेब डिजाईजरको वेतन अर्को व्यवसायको व्यक्तिको मासिक योग हो।
हरेक व्यक्ति जो पेशाको बारेमा यो धारणा छ सत्यलाई थाहा हुनुपर्छ। डिजाइनर धेरै मेहनत हुनुपर्छ। हरेक पेशाले कर्मचारीलाई उनको सबै समय दिन दिन आवश्यक छ। तर वेब डिजाईमरले कहिलेकाहीँ सम्पूर्ण दिन लामो काम गर्दछ, क्रमशः उचित स्तरमा क्रम पार गर्न।
आधुनिक युवतीले पहिल्यै वेब डिजाइनर कसरी बनाउने भनेर थाहा पाउँछ, यसको लागि के चाहिन्छ। तर अझै पनि, प्रोफेसरले सिफारिस गर्दछ कि तपाइँ आफ्नो भविष्य पेशा निर्धारण गर्न सक्नु अघि तपाइँ अधिक विस्तृत जानकारी अध्ययन गर्नु हुन्छ।
गंभीर कम्पनीहरूले केवल योग्य कर्मचारीहरू भागे जसले पूर्णकालिक अध्ययन पूरा गरेका छन्। वेब डिजाइनरको पेशा कसरी मास्टर गर्ने? कहाँ अध्ययन गर्ने?
उच्च शिक्षा भविष्य वेब डिजाइनर राज्य हाई स्कूल, पलिटेक्निक विश्वविद्यालय वा टेक्नोलोजी र डिजाइनको विशेष विश्वविद्यालयमा प्राप्त गर्न सक्दछ। यस्तो शैक्षिक संस्थान लगभग हरेक शहरमा अवस्थित छ, त्यसैले तिनीहरू उनीहरूको समस्याहरूको खोजीमा छैनन्:
सेन्ट पीटर्सबर्ग राज्य विश्वविद्यालय।
मास्को राज्य एकेडेमी। Stroganoff।
मास्को वास्तुकला संस्थान।
टेलिभिजनका सेन्ट पीटर्सबर्ग स्कूल।
क्रास्नोडार स्कूल डिज़ाइन
तपाईं वेब डिजाइनर पाठ्यक्रममा जान सक्नुहुन्छ। तपाईं आफैलाई कौशल मास्टर गर्न कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो गाह्रो छ, तपाईले धेरै विशेष साहित्य खोज्नु पर्छ, परीक्षण र त्रुटिले सुधार गर्नु पर्छ। इन्टरनेटमा अनलाईन प्रशिक्षण पनि प्रस्ताव गरिएको छ। 1-1,5 वर्षको लागि, सबैले एक वास्तविक प्रोको स्तरमा वेब डिजाइनरको पेशालाई मास्टर गर्न सक्छन्।
प्रत्येक डिजाइनरसँग अंग्रेजीको राम्रो आदेश हुनुपर्दछ, किनकी धेरै साइटहरू र कार्यक्रमहरू यस भाषामा आधारित छन्।
पेशाको सिद्ध र सहमति
वेब डिजाइनरको काम केहि सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष छन्।
साँच्चै योग्य भुक्तानी व्यवसायलाई परिवर्तन गर्न गाह्रो छ
खर्च बिना एक विचार लागू कौशलको निरन्तर सुधार चाहिन्छ
सबै त्रुटिहरू सजिलै सुधिएका छन् ठेकेदारको ग्राहक र ग्राहकले मेल खाँदैन
दूरस्थ काम गर्ने क्षमता उत्तम समाधानको ग्राहकलाई समझाउन सजिलो छैन
वेब डिजाइनरको रूपमा काम गर्नु सजिलो छैन। उहाँ साइटको उपस्थितिको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँले चित्रलाई सजावट गर्दछ, पृष्ठमा पाठ अस्वीकार गर्दछ, ग्राफिक तत्वहरू, लोगो र ब्यानरहरूसँग आउँदछ, साइटको प्रयोगकर्ता-अनुकूल नेभिगेसन विकास गर्दछ।
CSS-sprites: आधारभूत प्रविधी र उपयोगी सुझावहरू को विवरण
PNG-ढाँचा सुविधाहरू, आवेदन र लोकप्रियता को लागि कारण
आफ्नो साइट आकार फ्याफिकन
उत्तरदायी डिजाइन लागि CSS-रूपरेखा
आर्मेनियाली सलाद। आर्मेनियाली सलाद: व्यञ्जनहरु
लागि जनावर "Fosprenil" Immunomodulatory दबाइ: प्रयोगको लागि निर्देशन
उपकरण "VITYAZ" क्वांटम चिकित्सा: निर्देशन र प्रतिक्रिया
विकृति चित्र वा असामान्य कलात्मक निर्णय मा एक दोष छ?
Flowerbeds लागि के सीमाना चयन?
सोम REPOS - Vyborg मा पार्क। फोटो र समीक्षा। यात्रा: को सोम REPOS पार्क प्राप्त गर्न कसरी
टेप सील, दैनिक जीवनमा आवेदन र निर्माण
होटल बोडरम Resort4*, टर्की, बोडरम फोटो र समीक्षा
पुरुष hoodies - सुशील, व्यावहारिक र सहज वस्त्र
के बाट ponchos लगाउन? Poncho, कश्मीरी, फर बनेको बुना